Saripika misy vokany amin'ny nofy ao amin'ny Photoshop misy vokatra tena manintona | Famoronana an-tserasera
Ny nofy dia sarotra takarina amin'ny fotoana maro ary mety hanjary tsy azo antoka sy hamorona, noho io antony io dia nampiasaina imbetsaka tao anaty sinema ny nofy miaraka amin'ny hatsarana mitovy amin'ilay hitantsika amin'ny sary voalohany. ny sary misy vokany amin'ny nofy Photoshop miaraka amin'ny vokatra tena manintona zavatra mora atao izy io ary misy valiny tsy mampino hita maso izay hahatonga ny sarinay hahazo sanda fanampiny.
Get vokany mahaliana samy hafa mitambatra ny sosona ao Photoshop, mandritra izany fotoana izany hianatra hampiasa fitaovana sasany ianao mahazatra indrindra amin'ity programa ity. Ny zavatra mahaliana momba ny fifehezana ity teknika ity dia ny mety apetaho amin'ny horonan-tsary koa izany satria ny teknika dia mijanona tsy miova. Mianara mamorona vokatra mety ho tena ilaina amin'ny tranga tsy tambo isaina raha mandray ny fahalalana ianarantsika amin'izany lahatsoratra amin'ny hafa asa famoronana en Photoshop.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika hahazoana izany vokany eo amin'ny torimaso Photoshop dia ny manokatra sary azontsika iaraha-miasa. Raha vantany vao misokatra ny sary ao amin'ny Photoshop dia handika ny sosona lehibe izahay. Ny hevitr'izany rehetra izany lahatsoratra dia ny manova ny fametrahana ny sosona, ny opacity ary ny lokon'ny sary.
El vokatry izay ho vitantsika ara-pahitana dia ny mamorona sary miverimberina imbetsaka ary miaraka a fomba fijery somary tsy azo antoka.
ny tolo-kevitra rehefa miasa ao Photoshop Ireto misy manaraka ireto: miasa amin'ny fomba milamina, tonony ny sosona (raha manana betsaka isika) dia ampiasao foana ny sosona fanitsiana ahafahana mandray dingana sy manitsy lesoka, manandrama miasa amin'ny sary tsara kalitao, mieritreritra foana ny retouching alohan'ny handehanana miasa Photoshop.
Azontsika atao ny mamerina ny sosona im-betsaka araka izay tadiavintsika, arakaraka ny maha-imbetsaka ny sosona no averina ao Photoshop ny matanjaka dia vokatry ny torimaso, amin'ity tranga ity dia hataontsika avo roa heny izany intelo.
Ny zavatra manaraka ataontsika dia hampitombo ny haben'ny sosona ambony, azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny hitsin-dàlana + T na amin'ny fanontana fanovana maimaim-poana. Mampitombo sy mamindra ny sosona ambony isika mandra-pahatonga ny sary an'ity sosona ity ho lehibe kokoa noho ireo sosona ambany. Ny zavatra manaraka ataontsika dia opacity ambany amin'ity sosona ambony ity, miaraka amin'ity no ahazoantsika ny sosona ambony ho lasa mangarahara kokoa ary avelao hojeren'ny maso ilay sosona ambany hahazoana izany vokany indroa sary.
Rehefa avy nifindra sy nampidina ny opacity ny sosona ambony, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia avereno ny dingana miaraka amin'ireo ambin'ny sosona manao mitovy hatrany amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia tsy maintsy mahazo valin'ny a sary miverimberina matetika.
Efa manana ny estetika lehibe an'ny vokany eo amin'ny torimaso Photoshop, izao dia tsy maintsy mahazo a valiny hita maso manintona kokoa amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo tonony isan-karazany ho an'ny sary tsirairay izay nozarainay ho sosona. Mamorona a fanitsiana sosona isaky ny sosona, manondro Photoshop Tsy mila miasa afa-tsy amin'ny sosona ambany isika, amin'izany no ahazoantsika manana loko hafa ny sosona tsirairay, amin'izay valiny tena azo antoka.
Raha nandeha tsara ny zava-drehetra dia tokony hanana valiny toy ilay eo amin'ny sary etsy ambany isika, sosona fanitsiana ho an'ny sosona sary tsirairay.
Azontsika atao ny manampy sosona mahery mampitombo ny tanjaky ny loko, ity dia zavatra tsy voatery a vokatra manintona kokoa ara-pahitana.
Nahavita namorona tamin'ny Photoshop un vokany tena manintona eo amin'ny sehatra hita maso mampiasa fitaovana tsotra be dia be izay tsy mila be pitsiny na ny fifehezana ny programa. Photoshop manaitra antsika indray izy amin'ny azy azo atao maromaro. Aza adino fa ity fomba fiasa ity dia azo entina any amin'ireo tetikasa Photoshop hafa ary na dia ny Premiere aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Saripika misy vokany amin'ny nofy ao amin'ny Photoshop misy vokatra tena manintona
Mamorona tabilao mahomby amin'ny alàlan'ny fitsipika fototra 4